Nissan Terra Car 4WD, special offer USD 59,800,actual price USD 62,800. 2WD USD 56,000. actual price USD 59,000
Nissan ရဲ့ Premium အဆင့် ၇ယောက်စီး SUV ကားသစ်ကြီးကို ဒီမြို့မှာ အရင်ဆုံး ဝယ်ယူပိုင်ဆိုင်လိုက်ပါ။ Nissan Terra ကားသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၆၀ ကတည်းက ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့် Nissan SUV ၏ မျိုးဆက်ဖြစ်ပြီး အဆင့်မြင့်ပြီး စွမ်းဆောင်ရည်မြင့် သော အင်ဂျင်၊ နေရာကျယ်ဝန်းခြင်း၊ သက်တောင့်သက်သာရှိခြင်း၊ အဆင့်မြင့် မောင်းနှင်မှု နည်းပညာများ ကြောင့် ယာဉ်မောင်းရော ခရီးသည်ရော ဘယ်နေရာမဆို သက်တောင့်သက်သာဖြင့် သွားလာနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သတ်မှတ်ထားသည့် ကာလအတွင်းတွင် တကယ့် အထူးဈေးနှုန်းဖြင့် ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည့် အခွင့်အရေးပါ။ ဒီနေ့ပဲ နီးစပ်ရာ Nissan အရောင်းပြခန်းများကို မြန်မြန်လေး သွားလိုက်ကြစို့နော်..
*သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်း။စည်းကမ်းများ အတိုင်းသာ…. ၁။ ဧပြီလ ၃၀ ရက်နေ့အထိသာ ၂၊ ကညန လိုင်စင်ကြေး။ ၀င်ငွေခွန်နှင့် ရန်ကုန်လိုင်စင်ကြေးများ မပါဝင်သေးပါ။
Nissan ရဲ့ Premium အဆငျ့ ၇ယောကျစီး SUV ကားသဈကွီးကို ဒီမွို့မှာ အရငျဆုံး ဝယျယူပိုငျဆိုငျလိုကျပါ။ Nissan Terra ကားသညျ လှနျခဲ့သော နှဈပေါငျး ၆၀ ကတညျးက ထုတျလုပျခဲ့သညျ့ Nissan SUV ၏ မြိုးဆကျဖွဈပွီး အဆငျ့မွငျ့ပွီး စှမျးဆောငျရညျမွငျ့ သော အငျဂငျြ၊ နရောကယျြဝနျးခွငျး၊ သကျတောငျ့သကျသာရှိခွငျး၊ အဆငျ့မွငျ့ မောငျးနှငျမှု နညျးပညာမြား ကွောငျ့ ယာဉျမောငျးရော ခရီးသညျရော ဘယျနရောမဆို သကျတောငျ့သကျသာဖွငျ့ သှားလာနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
သတျမှတျထားသညျ့ ကာလအတှငျးတှငျ တကယျ့ အထူးဈေးနှုနျးဖွငျ့ ပိုငျဆိုငျနိုငျမညျ့ အခှငျ့အရေးပါ။ ဒီနပေဲ့ နီးစပျရာ Nissan အရောငျးပွခနျးမြားကို မွနျမွနျလေး သှားလိုကျကွစို့နျော..
*သတျမှတျထားသော စညျးမဉျြး။စညျးကမျးမြား အတိုငျးသာ…. ၁။ ဧပွီလ ၃၀ ရကျနအေ့ထိသာ ၂၊ ကညန လိုငျစငျကွေး။ ဝငျငှခှေနျနှငျ့ ရနျကုနျလိုငျစငျကွေးမြား မပါဝငျသေးပါ။